Miyaad rabtaa inaad ogaatid runta? - Markhaatiyaasha Yehowah websitekooda rasmiga ah
KU AKHRI Abbey Abua Acholi Afrikaans Ahanta Albanian Albanian Sign Language Altai American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou British Sign Language Bulgarian Bulgarian Sign Language Bété Cakchiquel Cambodian Carib Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Danish Sign Language Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Estonian Estonian Sign Language Ewe Fante Faroese Fataluku Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Fulfulde (Cameroon) Ga Galician Garifuna Georgian German Ghanaian Sign Language Gitonga Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guianese Creole Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Ibinda Icelandic Igbo Iloko Inakeanon Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Itsekiri Iu Mien Ivatan Japanese Japanese Sign Language Jiwaka Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kadazan Kalanga (Botswana) Kalenjin Kamayo Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinaray-a Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Kosraean Kpelle Krio Kryashen Kuhane (Subiya) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lakota Lamba Laotian Latvian Latvian Sign Language Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lithuanian Sign Language Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Luxembourgian Macedonian Macua Madi Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Manipuri Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayangna Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Melpa Mentawai Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Nias Nicaraguan Sign Language Nicobarese Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Piaroa Pidgin (West Africa) Pilagá Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chibuleo) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Macedonia) Romany (Northern Greece) Romany (Romania) Romany (Southern Greece) Rungus Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Scottish Gaelic Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Voru Wallisian Warao Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Yacouba Yakutsk Yapese Yoruba Yukpa Yup'ik Zambian Sign Language Zande Zapotec (Guevea) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Miyaad rabtaa inaad ogaatid runta?
RUNTEE baa laga hadlayaa? Runta ku saabsan su’aalaha ugu muhiimsan ay binu’aadanku is weyddin karaan. Malaha waxaad is weyddisay su’aalahan oo kale:
Ilaahay miyuu ina daneeyaa?
Dagaal iyo rafaad miyay dhammaan doonaan?
Maxaa igu dhici doonaa markaan dhinto?
Kuwii dhintay rajo may leeyihiin?
Sidee baan Ilaahay u baryaa si uu ii maqlo?
Sidee baan farxad u heli karaa?
Halkee baad ka raadin lahayd jawaabta su’aalahan? Haddii aad maktabadda aaddid ama dadka weyddisid waxaad helaysa jawaabo iska hor imanaya. Xataa haddaad heshid war macquul ah, markuu waqtigu isbeddello warkaas casri ma ahaan doono.
Laakiinse waxaa jiraa buug ay ku kooban yihiin jawaabo la aammini karo. Kaas waa buug been aan sheegin. Ciise mar uu Ilaahay baryay wuxuu yiri: “Ereygaagu waa rune.” (Yooxanaa 17:17) Eraygaas waa Kitaabka Quduuska ah. Markaad akhrisatid qoraalkan saafiga ah waxaad arki doontaa inuu Kitaabka Quduuska ah jawaabo xaqiiq ah ku hayo.
MAXAA SU’AASHAN SABABAY? Waxaynu ku noolnahay adduun xaqdarro ka buuxo oo bilaa naxariis ah. Diimaha intooda badan waxay dadka baraan inuu rafaadku Ilaahay doonistiisa yahay.
MUXUU KITAABKA QUDUUSKA AH INA BARAA? Ilaahay weligiis shar muu sababin. Nebi Ayuub baa yiri: “Ilaah inuu xaqdarro sameeyo way ka fog tahay; oo Ilaaha Qaadirka ahna inuu xumaan falo way ka fog tahay.” (Ayuub 34:10) Ilaahay ulajeeddo wanaagsan buu binu’aadanka u hayaa. Sidaas darteed Ciise wuxuu yiri sidan Ilaahay u barya: “Doonistaada dhulka ha lagu yeelo.” (Matayos 6:9, 10) Ilaahay si dhab ah buu inoo daneeyaa oo waxyaallo waaweyn buu inoo sameeyay si uu ulajeeddadiisa u dhammaystiro.—Yooxanaa 3:16.
Oo eeg Bilowgii 1:26-28; Yacquub 1:13 iyo 1 Butros 5:6, 7.
MAXAA SU’AASHAN SABABAY? Dagaalku wuxuu sababay dhimashada dad aan la tirin karin. Kulligeenna rafaadka haystaa binu’aadanka baa ina soo gaaray.
MUXUU KITAABKA QUDUUSKA AH INA BARAA? Ilaahay wuxuu sii sheegay waqti uu dhulka oo dhan meel nabad ah ka dhigi doono. Markuu Ilaahay dadka maammulo, “mar dambe dagaal ma ay baran doonaan.” Laakiinse “waxay seefahooda ka tuman doonaan marashiyo.” (Ishacyaah 2:4) Ilaahay xaqdarrada iyo rafaadka oo dhan wuu joojin doonaa. Kitaabka Quduuska ah wuxuu inoo ballan qaaday: “[Ilaahay] indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore [oo ah xaqdarrada iyo rafaadka maalmahan jira] way dhammaadeen.”—Muujintii 21:3, 4.
Oo eeg Sabuurradii 37:10, 11; 46:9 iyo Miikaah 4:1-4.
MAXAA SU’AASHAN SABABAY? Dad baa aamminsan markay dhintaan in nafsadooda sii noolaato. Qaar waxay sheegaan inay dadka dhintay kuwa nool waxyeeli karaan ama inuu Ilaahay kuwa sharka leh meel naar ah ku ciqaabi doonaa.
MUXUU KITAABKA QUDUUSKA AH INA BARAA? Binu‘aadanku markay dhintaan ahaanshahoodu wuu dhammaaday. Nebi Suleymaan wuxuu yiri: “Kuwa dhintay waxba ma oga.” (Wacdiyahii 9:5) Maadaama kuwii dhintay ogaansho, dareen ama xasuus ay saa lahayn, waxba ma yeeli karaan kuwa nool oo qofna ma caawin karaan.—Sabuurradii 146:3, 4.
Oo eeg Bilowgii 3:19 iyo Wacdiyahii 9:6, 10.
MAXAA SU’AASHAN SABABAY? Kulligeen waxaynu jecelnahay inaynu noolaanno oo reerkeenna la raaxaysanno. Sida darteed waa caadi inayn kuwii inaga dhintay xiiso u qabno.
MUXUU KITAABKA QUDUUSKA AH INA BARAA? Kuwii dhintay intooda badan dib baa loo soo nooleyn doonaa. Ciise wuxuu inoo ballan qaaday “kuwa xabaalaha ku jiraa…wayna ka soo bixi doonaan.” (Yooxanaa 5:28, 29) Ilaahay ulajeeddadiisa waa inay kuwa dib loo soo nooleeyay meel raaxo ah ku noolaadaan. (Ishacyaah 65:21-25)Waqtigaas Ilaahay kuwa isaga addeeca wuxuu siin doonaa caafimaad kaamil ah iyo nolol weligeed aan dhammaaneyn. Kitaabka Quduuska ah wuxuu yiri: “Kuwa xaqa ahu dalkay dhaxli doonaan, oo weligoodna way dhex degganaan doonaan.”—Sabuurradii 37:29.
Oo eeg Ayuub 14:14, 15; Luukos 7:11-17 iyo Falimaha Rasuullada 24:15.
MAXAA SU’AASHAN SABABAY? Intooda badan dadka diin haysta way tukadaan. Laakiin ma hubaan in loo jawaabi doono.
MUXUU KITAABKA QUDUUSKA AH INA BARAA? Ciise wuxuu inagu yiri markaynu Ilaahay barinno kelmedaha aan isticmaalayno inaynu ku celcelino ma aha. (Matayos 6:7) Haddii ayn doonayno inuu Ilaahay baryadeenna maqlo waa inaynu sida isagu ka raalli yahay u barinno. Haddaba waa inayn Ilaahay doonistiisa baranno oo markaasna habkaas u barinno. Kitaabka Quduuska ah waxaa ku qoran: “Haddaynu wax uun doonistiisa ku barinno, isagu wuu ina maqlaa.”—1 Yooxanaa 5:14.
Oo eeg Sabuurradii 65:2; Yooxanaa 14:6; Yooxanaa 16:23, 24 iyo 1 Yooxanaa 3:22.
MAXAA SU’AASHAN SABABAY? Dad badan baa aamminsan inay lacag, caannimo ama qurux farxad keento. Haddaba waxyaalahaas aad bay u raadiyaan, laakiin farxad ma helaan.
MUXUU KITAABKA QUDUUSKA AH INA BARAA? Ciise wuxuu inoo muujiyay sida aynu farxad u heli karno oo wuxuu yiri: “Waxaa barakaysan kuwa ereyga Ilaah maqla oo xajiya.” (Luukos 11:28) Sida keliya ayn farxada runta ah u heli karno waxaa weeye inayn Ilaahay iyo ulajeeddadiisa baranno. Runtan waxaad ka heli doontaa Kitaabka Quduuska ah. Goortaynu runta baranno waxayn kala garan doonnaa waxyaalaha muhiimka ah iyo waxyaalaha aan ahayn. Haddii ayn oggolaanno tilmaanta Kitaabka Quduuska ah waxaa waajib ah inayn wax kastoo ayn dooranno iyo wax kastoo ayn sameyno ku xirno. Sidaas keliya bay nolosheennu micno u yeelan doontaa.
Oo eeg Maahmaahyadii 3:5, 6, 13-18 iyo 1 Timoteyos 6:9, 10.
Waxaynu aragnay siduu Kitaabka Quduuska ah lix su’aalood si kooban inoogu jawaabay. Miyaad doonaysaa waxbarashadan inaad sii wadatid? ‘Haa’ baad oran doontaa, haddii aad ka mid tahay kuwa Ilaahay hadalkiisa dhegeysta. Malaha waxaad is weyddisay su’aalahan oo kale: ‘Haddii uu Ilaahay ina daneeyo muxuu wax uga qaban waayay sharka iyo dhibaatooyinka adduunka jira? Sidee baan nolosha reerkayga u wanaajiyaa?’ Kitaabka Quduuska ah baa ina siinaya jawaabo lugu qanco.
Dad badan baan oqoon waxa Kitaabka Quduuska ah ku qoran ama akhriskiisu ku adkaaday. Maad jeclaan lahayd inaad Kitaabka Quduuska ah fahamtid? Markhaatiyaasha Yehowah (Markhaatiyaasha Yehowah magaca Ilaahay oo Yehowah ah bay dadka baraan) way ku caawin doonaan.
Waxay ku keeni doonaan qoraal ku micneynaya Kitaabka Quduuska ah. Weliba si bilaa lacag ah bay ku bari doonaan tacliinta Kitaabka Quduuska. Mid Markhaatiyaasha Yehowah ka mid ah oo Kitaabka Quduuska ah bartay baa kula kulmi doonaa meel adiga kugu habboon. Dad tiro badan baa ka faa’iideystay waxbarashadan oo farxad la dhehay: “Runtii baan helay!”
Wax ka qiimo badan ma heli karno. Runta Kitaabka Quduuska ah waxay inaga xoreysaa khuraafaadka, jahawareerka iyo cabsida. Waxay ina siisaa rajo, micno iyo farxad. Ciise wuxuu yiri: “Oo waxaad garan doontaan runta; runtiina waa idin xorayn doontaa.”—Yooxanaa 8:32.
BARNAAMIJKA DHIGASHADA KITAABKA
Maxaa loo Barta Kitaabka Quduuska ah?
Caalamka oo dhan malaayiin qof baa Kitaabka Quduuska ah ka helay jawaabaha nolosha ugu muhimsan. Ma jeclaan lahayd inaad kuwaas ka mid noqotid?
Suʼaalahaaga Kitaabka Jawaabo Saxan u Hel